Io no vokatry ny fivoriana nihaonan’izy ireo tamin’ny filohan’ny federasiona malagasin’ny basket ball, tany Paris farany teo. Ny fanamafisana fa handoa ilay antoka 1 500 000 dolara, izay saran’ny fampiantranoana ity hetsika goavana ho an’ny Fiba Afrika ity, no andrasan’ny rafitra mifehy ny basket eto Afrika amin’ny fanjakana.
Efa mitongilana eto amintsika aloha hatramin’izao ny vintana ho amin’izany fandraisana ny « Afrobasket men » izany. I Maraoka, izay mbola tany mikorontana amin’izao, no mpifanandrina akaiky amintsika, araka ny nampitain’ny filohan’ny Fmbb ity. « Hoentina mifehy ny fampitana mivantana ireo lalao rehetra hotontosaina any amin’ireo firenena mpandray anjara no anton’ity volabe ilaina ity », araka ny fantatra.
Hetsika iray hahatongavan’ireo teknisianina maneran-tany hanararaotra hitily mpilalao ho amin’ireo sehatra goavana toy ny NBA koa izany. Azo heverina ho tsena ho an’ny mpilalao mihitsy ity hetsika ity ary hoentina mampahafantatra ny firenena manerana izao tontolo izao, toy ny natao tany Lybie tamin’ny taona 2009.